“Mourinho wuxuu had iyo jeer wax iga weydiin jiray kooxda Bayern Munich” – Schweinsteiger – Gool FM
“Mourinho wuxuu had iyo jeer wax iga weydiin jiray kooxda Bayern Munich” – Schweinsteiger
Dajiye November 4, 2019
(Bayern) 04 Nof 2019. Xiddigii hore kooxaha Bayern Munich iyo Manchester United ee Bastian Schweinsteiger ayaa si maldahan u sheegay suurtogalnimada uu Jose Mourinho ku noqon karo bedelka Niko Kovač ee naadiga Bayern.
Kooxda Bayern Munich ayaa shaqada ka ceyrisay macalinka reer Croatia ee Niko Kovač, kaddib guuldaradii 5-1 aheyd ee ka soo gaartay naadiga Eintracht Frankfurt kulankii la soo dhaafay ee horyaalka Bundesliga.
Haddba wargeyska “Manchester Evening News” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Bastian Schweinsteiger waxaana uu yiri:
“Waxaan qiyaasi karaa in Jose Mourinho uu macalin ka noqon karo dalka Germany”.
“Waxaan xasuustaa markii aan wada joognay Manchester United, wuxuu wax iga weydiin jiray kooxda Bayern Munich iyo horyaalka Bundesliga, wuxuu had iyo jeer TV-ga ka daawan jiray ciyaaraha Bundesliga”.
“Mourinho wuxuu garanayaa ciyaaryahan walba oo ka ciyaara Bundesliga shaqsi ahaan, xitaa haddii uu ka ciyaaro koox yar, sidoo kale wuxuu baranayay afka Jarmalka”.
Real Madrid oo ka gashay kaalinta 22-aad liiska kooxaha ugu weerarka xoogan ee Yurub
Zidane oo ka codsaday Real Madrid inay la soo wareegto mid ka mid ah daafacyada kooxda Arsenal